जोक्कर सरको रजगज- विचार - कान्तिपुर समाचार
असार १९, २०७६ खगेन्द्र संग्रौला
जोक्कर्‍याइँ जीवनको प्रधान तत्त्व होइन, सहायक तत्त्व हो । नभई नहुने, ज्यास्ती भए बित्यास पर्ने । त्यसैले जोक्कर नाटकको नायक होइन, केवल खलनायक महलको जीव हो । जीवनको वास्तविक नाटकमा जब खलनायक मार्काको जोक्कर नै नायक बन्छ, जीवनको अर्थ र गरिमा चौपट हुन्छ । सत्ता राजनीतिको हकमा पनि कुराको चुरो यही हो । जब सत्ता राजनीति कमिकतुल्य र सत्ताको माउ कर्ता जोक्करतुल्य बन्छ, तब कुरो गडबड हुन्छ । सिसिफसको वेदनामय किस्सामा झैँ हरिप जिन्दगीमा झल्ला कमिक दोहोरिँदो छ । यो प्रत्यक्ष देखिँदै छ, कष्टसाथ भोगिँदै छ र त्यसैत्यसै आजित भइँदै छ ।
ट्वीटको जङ्गलमा म उत्सुक आँखा दौडाउँदै के थिएँ, अजिवको जीवसँग जम्काभेट भयो । जीव युट्युबमा छ । ऊ तामसी हाउभाउसाथ बोल्दै छ । उसको कुटिल अनुहारमा दम्भ छ, ढोँगी बोलीमा अहंकार छ, र बोलाइको लय र तालमा झल्ला जोक्कर्‍याइँ छ । केके न ठूलो कुरा गरेझैँ वक्ता भन्छ— ‘म प्रधानमन्त्री भएका बेला मैले भनेको थिएँ— अब काठमाडौँमा नाक समातेर हिँड्नुपर्दैन । अब मास्क लगाउनुपर्दैन । म प्रधानमन्त्री भएको बेला काठमाडौँको आधा जनसंख्या मास्क लगाएर हिँड्थ्यो, अहिले मास्क लगाएर कोही पनि हिँड्दैन ।’
सोचेँ— यो जो बोल्दै छ, केवल राजनीतिक नाटकको जोक्कर हो । जोक्कर बोल्यो र श्रोतागणले गलल्ल हाँस्दै परर्र ताली बजायो । नयनराज पाण्डेले ट्वीटमा टिप्पणी गरे— ‘रमाइलो छ संसार !’ एक गम्भीर स्रष्टाको यो टिप्पणीले मलाई किञ्चित् आश्वस्त तुल्यायो— हो, यो जोक्कर्‍याइँयुक्त राजनीतिक नाटक हो, यथार्थ जीवनको यथार्थ दृश्य किमार्थ होइन । यो त केवल झल्ला कथ्यमा हल्का मनोरञ्जनको लेप लगाइएको झल्ला दृश्य हो । तर लाल मजदुर नामक ब्रोको ट्वीटे टिप्पणीले भने मलाई किञ्चित् झस्कायो । यी लालबाबुले कटाक्ष गरे— ‘सारा सडक खाली गरेर हिँडेछि मास्क कता देखिनु नि ब्रो ?’ ए गाँठ्ठे ! कमिकतुल्य यो दृश्य त वास्तविक पो हो कि ? वक्ता उही धरती र आकाश कब्जा गरी घरी बाहिर, घरी भित्र सवारी हुने औतारी मानव पो हो कि ? सान्त्वनाको खोजीमा मेरो बेचैन चित्त हास्य उस्ताद मिस्टर मनोज गजुरेलतर्फ मोडियो । प्रधानमन्त्रीको अभिनयमा सायद छद्मभेषी मनोज होलान् । र सायद यो गाईजात्राकालीन झल्ला हास्य होला । यसरी गम खाँदै दृश्य दोहोर्‍याएर हेरेँ । वचन ध्यान दिएर सुनेँ । अरे, जोक्कर त साँच्ची नै वास्तविक जीवनको वास्तविक पात्र जस्तो पो छ बा ! म झन् झस्केँ ।
नभन्दै झल्ला हास्यका झल्ला अभिनयकर्ता त श्रीमान् ओली सर पो रहेछन् । सर्वज्ञानी एवं सर्वशक्तिमान् ओली सर । नेकपाका दुईदुनी चार डाक्टर सम्माननीय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली । ओली सरको झल्ला हास्यप्रति झल्ला प्रतिक्रिया गर्दै जसले थप्पडी बजाए, ती को हुन् ? हास्यकारका आउरे–पाउरे र धुपौरेहरू ? निजहजुरका हुक्के, ढोके र बैठकेहरू ? निज प्रभुका आज्ञाकारी भक्त–भक्तिनीहरू ? हैकमी एवं तजबिजी सत्ताद्वारा पालित, पोषित र रक्षित अरिङ्गालहरू ? आत्महीन एवं स्वाभिमानविहीन दास–दासीहरू ? कि रैतीबाट नागरिकमा नफेरिन जिद्दी गर्ने कमारा–कमारीहरू ? आफ्नै विशिष्ट स्वत्व र निजत्वसहितका जीव हुँदा हुन् त तिनले आफैप्रतिको क्रूर ठट्टा झल्किने झल्ला कथनको प्रतिक्रिया झन् झल्ला मुद्रामा त्यसरी किन पो गर्दा हुन् र ? चिउँडा–चिउँडामा मास्क झुन्ड्याएका छन्, अथवा झोलाझोलामा मास्क कोचेका छन् । र, ती नवनरेशको परम अनुकम्पाले जीवन मास्कमुक्त भएको कथनको अनुमोदनमा अट्टहासका साथ थप्पडी बजाइरहेछन् । ल हेर, कठोर शासक मास्क लगाएर कष्टको कहर काटिरहेको दयनीय जनजीवनफ्रति त्रूर ठट्टा गरिरहेछ ! त्यो क्रूर ठट्टाबाट मानौँ पुलकित हुँदै झल्ला भीड कर्कश हल्ला गरिरहेछ ।
गणतन्त्रको सत्ताको गद्दीमा ओली सर विराजमान छन् । सत्ताको मुहुनीमय गद्दा हेरेर घुटुक्क थुक निल्दै पुष्पकमल ब्रो ट्वाँ परेर टोलाइरहेका छन् । राजधानीमा आर्थिक प्रदूषण, नैतिक प्रदूषण र वायु प्रदूषण दिन दुगुना रात चौगुना बढ्दो छ । तैपनि बिनालाज, बिनासंकोच सत्तासीन चटकेश्रीबाट आज्ञा हुन्छ— मेरो पौरखी शासनमा हिजोको आजै काठमाडौँ प्रदूषणमुक्त भयो । यथार्थमा काठमाडौँ छ प्रदूषणद्वारा हदै आक्रान्त, ढाँटकलामा विशारदप्राप्त चटके ख्वामितबाट आज्ञा हुन्छ यस्तो ! तर कुरा अचम्मको छ । स्वयंप्रतिको यो क्रूर ठट्टालाई मानौँ कोही पनि गम्भीर रूपले लिँदैन । नयनराज पाण्डेजस्ता संवेदनशील एवं मानवतावादी स्रष्टासमेत यसलाई हल्का टिप्पणीमा फुस्स उडाइदिन्छन् । आखिर किन ? सायद सत्ताधारी जोक्करले अहोरात्र जोक्कर्‍याइँ गर्दागर्दा हाम्रा संवेदन तन्तुहरू भुत्ते र थेत्तरा भएर । सायद झल्लापन नै जीवन–यथार्थको नित्य दिनचर्या भएर । सायद लापरबाही र खेलाँचीसामु जीवनको गम्भीरता आजित, पराजित एवं लाचार भएर ।
देशको कार्यकारी प्रमुख ठट्टा होइन । देश–दुनियाँको जीवनमा उसका एकएक वचन, एकएकं सङ्केत र एकएक हाउभाउको सुल्टो वा उल्टो, सुखद वा दु:खद, क्षणिक वा दूरगामी प्रभाव त पर्छ नै । कार्यकारीले जनजनको पीडाप्रति
मनोरञ्जक मुद्रामा यति क्रूर ठट्टा गर्दा मिडियामा बबाल प्रतिक्रिया हुनुपर्ने हो । बुद्धिजीवीहरूमाझ उत्पात खैलाबैला हुनुपर्ने हो । मानव अधिकारवादीहरू प्लेकार्ड उचालेर सडक–सडकमा लाम लाग्नुपर्ने हो । युवा विद्यार्थीहरूका उत्ताल आक्रोशका स्वरले आकाश घन्किनुपर्ने हो । र, माइतीघर मण्डलमा जनसागरको आवेगी लहर उर्लिनुपर्ने हो । तर छैन ! ट्वीटर–फेसबुकका खत्र्याक–खुत्रुक प्रतिक्रियासिवाय कतै केही देख्नु–सुन्नु छैन । किन ? किनभने शासक महलका भुइँफुट्टाहरूको बकवास सुन्दासुन्दा लोकको संवेदना जडवत् भएको छ । सत्तासीन चटके भन्छ— एक वर्षमा देश तुइनमुक्त हुन्छ । वर्ष बित्छ, तुइनबाट खसेर मान्छे मर्ने क्रम तुरिँदैन । चटके पुस १६ गते पानीजहाजको टिकट काट्न आऊ भन्छ । पुस १६ आउँछ, टिकटले हावा खान्छ । चटके अब कसैले भोकै मर्नुपर्दैन भन्छ, दीनदु:खी भोकै मरिरहन्छ । चटके अब कसैले जाडो र गर्मीले मर्नुपर्दैन भन्छ, गरिब जाडो र गर्मीले मरी नै रहन्छ । चटके यावत् सडक चिल्ला र आरामदायी भए भन्छ, सडकका खाल्डामा खसेर बालक मरिरहन्छ । तर यो सब चुपचाप सहिन्छ, कतै बबाल विरोध हुँदैन । किन ? सायद चटकेका सिल्ली आश्वासनहरूको अनवरत शृङ्खलाले मानवीय संवेदनालाई चुटेर, लेथ्नो बनाएर, भुत्ते पारेर र थेत्तरो तुल्याएर ।
पहिले राजा त्रिभुवनको सिल्ली वचन सुनिन्थ्यो, अहिले छद्मभेषी राजा ओली सरको सिल्ली वचन सुन्नुपर्‍या छ । गरिब प्रजाले ‘खान पाइनँ सरकार’ भन्दा त्रिभुवन छक्क पर्दै ‘तैँले पेटभरि दूधभात पनि खान पाइनस् ?’ भनेर सोध्थे रे । अहिले उही गगनबासी त्रिभुवनको सिको गर्दै निजका उत्तराधिकारी भन्छन्— ‘अहिले काठमाडौँमा मास्क लगाएर कोही पनि हिँड्दैन !’ जनजीवनको असह्य कष्टमाथि यति क्रूर ठट्टा त्यसैले मात्र गर्न सक्छ, जो संवेदनशील जीवनको यथार्थ धरातल छाडेर छिचिमिरे औतारको कमिलोझैँ आकाशमा उडिरहेछ, जो जीवन–यथार्थका स्पन्दनशील प्रक्रियाहरूबाट बिलकुल विमुख छ, जो मानवीय करुणाशून्य छ, जो लज्जाहीन छ, जो जनजनका दु:खदर्दमाथि ठट्टा गर्नमा ठूलो पराक्रम र आनन्द अनुभूति गर्छ । भन्न असजिलो लाग्छ मान्यवर, तर यो भन्न म अभिशप्त छु । जो यो सब गर्छ, त्यो सिल्ली हो । यसो गम खाँदा मलाई त योभन्दा ठूलो अनिष्टको डर लाग्छ । धरातल छाडेको, तर्कसङ्गतिबाट च्युत भएको, लाज र घीन बिर्सेको, दम्भले उन्मत्त भएको, जनजनका दु:खमाथि निर्मम ठट्टा गर्दै आनन्द लिने शासक महलको अजिवको यो जीवले जे पनि भन्न सक्छ, जे पनि गर्न सक्छ । कुनै दिन यसले ‘बालुवाटार सेरोफेरोको समस्त भूमिको भूपति मै हुँ’ भन्यो भने !? ‘हाम्रा पुर्खाले कत्रा दु:खले आर्ज्याको यो गोर्खा राजको राजा मै हुँ’ भन्यो भने !? अचम्म छ, सिंहासनबासी प्रभुको घातक जोक्कर्‍याइँबाट आक्रान्त लोक यो विरल सरकारको स्वास्थ्य–परीक्षाको माग किन गर्दैन ?
हो, शासक पाषाणहृदयी छ । जनजीवनको दुर्दशामाथि ठट्टा गर्नु ऊसको अनिवार्य दिनचर्या बनेको छ । बिजुलीको लट्ठामा बसेर कौवा सोध्छ— यस्तो त्रूर ठट्टा आखिर कहिलेसम्म ब्रो ? प्रश्न शून्य आकाशमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डिएको छ । आहत माइतीघर मण्डल मानौँ चारै दिशा हेर्दै व्यग्र मुद्रामा उत्तर पर्खिरहेको छ । प्रकाशित : असार १९, २०७६ ०७:४९
फाल्गुन ११, २०७५ खगेन्द्र संग्रौला
काठमाडौँ — तोदिन कानै खाने डंक पिटानको स्वरमा सुनिन्छ— अब भने देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्‍यो  । उन्मादको तहमा उमंगित र पुलकित शासकहरू यसै भन्छन्  ।
शासनतन्त्रद्वारा रक्षित, पालित र पोषित असल–असल कटुवालहरू यसै भन्छन् । यो उद्घोष नपत्याउनुमा भयंकर खतरा छ । घोर लाञ्छनायुक्त लबजमा ‘बुद्धिजीवी’ भनिइन्छ । सारा जगत्ले सुन्ने गरी शासनतन्त्रका पैरवीकारहरूको खप्की खाइन्छ । वागी पथगामीलाई चिलेर अहिल्यै मारुँलाझैँ गरी अरिंगालको उन्मत्त गोलो झ्वाम्मै खनिन्छ । नवीन युगको ढोका खोल्ने जादुगरी सरकारको गोप्य जासुसी स्रेस्तामा नाम चढ्छ । र, निकट भविष्यको गर्भमा कठोर दण्ड–सजाय अंकित हुन्छ ।
याम छ ठण्डी हिउँदको । स्थान मेरो गृहनगरी चाबेलस्थित गणेशस्थान मन्दिर । महाभूकम्पले भूमिसात् भएको मन्दिर पुनर्निर्मार्णको व्यग्र प्र्रतीक्षामा छ । ‘लम्बोदर’ भनिने रूप न रङका भुँडे गणेश कतिकति दिनदेखि सुकुम्बासी भएका छन् । बरा ती बक्विहीन छन्, ती गुनासोरहित छन् । त्यसैले त ती यत्रो दिन बिनाबास अलपत्र परेका हुन् । मन्दिर छेवैको ढ््याके निजी घरको पेटीमा एउटा भिखारी सुतेको छ । छाँटले भुँडे गणेशकै जस्तो छ उसको दुर्दशा पनि । हो, उसको पनि न घर छ न बोली छ । आफूलाई यो हरिबिजोकको अवस्थामा गिराउने समाज–व्यवस्थाप्रति उसमा न कुनै मुखर असन्तुष्टि छ, न कुनै वाचाल विरोध छ । प्रतिरोध त धेरै परको कुरा भयो । दमित र कुण्ठित मौन भावमा ऊ के सोच्दो हो, त्यो उही मात्र जान्दछ ।
साँच्चै भन्ने हो भने यो भिखारीको हाल सूँढधारी गणेशजीको भन्दा पनि बेहाल छ । गणेशजी त भोक, रोग र मृत्युरहित छन् । जो जीवनशून्य छ, त्यो नाथेलाई केको भोक ? केको रोग ? त्यसको केको मृत्यु ? तर भिखारी जीवित छ । र, उसलाई चिन्ताहरूका कारक भएर आफ्नै छायाले झैँ जिजीविषा, भोक, रोग र मृत्युले हर्दम पछ्याइरहन्छन् । मेरो नित्य मर्निङ वाकको बाटो त्यही पर्छ । पहिले गणेशजीको मन्दिरविहीन मन्दिर अनि त्यसपछि भिखारीको खुला शयन पेटी । समय बिहान सखारै साढे चार बजेको हो । जब महेन्द्रीय फौजी ताण्डवको स्मरण गराउने चिसो पुस १ गते आयो, भिखारी त्यही पेटीमा, त्यसरी नै सुतेको थियो । जब जाडोको निर्मम औतारमा पुस १५ गते आयो, भिखारी त्यहीँ, त्यसरी नै सुतिरह्यो । पानी पर्‍यो र जाडो उर्लियो । तैपनि ऊ उही ठाउँमा, उसैगरी सुती नै रह्यो । उसको सुकुल भने पनि, डसना भने पनि, तन्ना भने पनि चुरोटको पेटीको कागतका केही टुक्राहरू छन् । शिरमुनि सिरानी छैन । उसले केवल नीलो–नीलो रङको फ्यालफ्याले कम्मल ओढेको छ । सके ऊ भोकै होला । रनै त भोजनको जीवनदायी ऊर्जारहित ज्यान जाडाले डल्लिएर ऊ त्यसैत्यसै कुङलिङ परेको छ । मलाई ऊ सधैँ केवल हलचलशून्य निर्जीव मानव–देहजस्तो लाग्छ । कान थापेर यसो सुन्छु तर सास भने ऊ फेर्दै हुन्छ । लौ, यो बेवारिसे जीव अर्को एक रात बाँच्यो ! खिन्न मुद्रामा मनमनै भन्छु र म भण्डारखालको वनतिर लमक–लमक बाटो तताउँछु ।
जब जाडो तैबिसेक कम थियो, भिखारीको समीपमा तीनवटा भुस्याहा कुकुर सुत्थे । त्यो दृश्यले मलाई लैनसिङ बाङदेलको ‘लंगडाको साथी’ को झल्को दिलाउँथ्यो । जाडो बढ्यो, र चौपाया मित्र मण्डलीले प्राणरक्षा गर्न कतै टाप ठोक्यो । भुस्याहा नै सही, कम से कम साथमा जाडो बाँडचुँड गर्ने केही कुकुर त थिए । यो भिखारीलाई तिनले पनि परित्याग गरे । र, कठ्याङ्ग्रिने जाडो, अथाह कष्ट र सम्भावित मृत्युसिबाय ऊसँग अब कोही रहेन । लक्षण हेर्दा लाग्छ, यो भिखारीको देशमा धनदौलत छेलोखेलो छ । औतारी शासकहरूद्वारा कल्पित यो नयाँ युगमा घुस, कमिसन र विलास त अर्ब–अर्बको दरमा चल्दो छ । अखबार भन्छ— उः त्यसले बिघ्नै विलासी मुद्रामा ट्याक्क तीन अर्बको हेलिकप्टर खरिद गरायो । उः अर्काले वाइडबडीको ६ अर्ब सप्रेम ग्रहण गर्‍यो । उः कोही सुमार्गीले ५ अर्ब बजायो, कोही कुमार्गीले ६ अर्ब उदरस्थ गर्‍यो । अनि घैँटेले यति, लोर्केले उति । चरीले यति, हाब्रेले उति । मानौँ यो मुलुकै नोटको रासमाथि खडा भएको छ । तर यो भिखारीको पेट रित्तो छ, आङ नाङ्गो छ । यसको दृष्टिमा घना अन्धकार छ, हृदयमा गाढा सन्ताप छ । दिनभरि फोहोरका डंगुरहरू खोस्रिएर र हात पसारेर पनि यसको हात सधैँ खाली–खाली छ । चटकजीवी शासकहरूको राजमा यो भिखारीको न उभिने माटो छ, न हिँड्ने बाटो छ, न कतै आशाको फिलुंगो छ । आखिर यो ‘नवयुग’ मा यो भिखारीको यस्तो हताशायुक्त दशा आखिर किन छ ?
सोचेर ल्याउँदा कुरो जटिल छ, उपद्रै जटिल । नयाँ भनी न्वारान गरिएको यो युगका शासनाधिकारी स्रष्टाहरू हाक्काहाक्की हामी कम्निस्ट हौँ भन्छन् । यिनले मुखै फोरेर ‘हौँ’ भनेपछि यी कम्निस्ट त अवश्यै हुन्, तर नयाँ युगका, नयाँ मार्काका, एक तमासका कम्निस्ट । सोचाइ, चरित्र र जीवनशैलीको चुरोका हिसाबले यी पुँजी पारखी हाइब्रिड कम्निस्ट हुन् । छोटोमा छिट्टो भन्दा ‘पूँपाहा’ कम्निस्ट । इतिहासले हामीलाई रटाएको छ— जो सबैभन्दा गरिब र दीनदुःखी एवं उत्पीडित र अपहेलित छ, कम्निस्ट उसको परम् मित्र हो । उसको जागरणकर्ता, जीवनको संग्रामीपथको उसको भरपर्दो सहयाक्री, मुत्तिमार्गको उसको अग्रणी एवं सदैव समर्पित योद्धा । कुरो साँच्चि नै यसो हो भने यी पूँपाहा कम्निस्टहरू यो भिखारीका को हुन् ? यो नयाँ युगको सत्य तीतो छ, यी पूँपाहाहरू यो भिखारीका कोही नै होइनन् । आखिर किन ? किनकि यो भिखारीको जीवन सर्वथा उपयोग मूल्यविहीन छ । यो भूस्वामी होइन । तसर्थ यसको नागरिकता छैन । यो अनागरिक भिखारी पूँपाहा कम्निस्टहरूको मतदाता होइन । न त यो तिनको घुसदाता हो, न हो यो तिनको कमिसनदाता नै । यो फुकिढल छ, तसर्थ यो तिनको बाहुबलदाता पनि होइन । गद्दीनसीनपूँपाहा कम्निस्टहरूका दृष्टिमा यो अकिञ्चन भिखारीको एक पित्कोधरी उपयोग मूल्य छैन । तसर्थ यो बाँचोस् कि मरोस्, तिनलाई बाल मतलब छैन । उसो त नानाओली नौरंगी मानव अधिकारवादीहरूका दृष्टिमा पनि यसको कुनै उपयोग मूल्य छैन । न त अनेकओली धन्दाजीवी नागरिक सामाजका दृष्टिमा नै यसको खासै उपयोग मूल्य छ । जगत् जान्दछ— यस्ता बेवारिसे आबाराहरूमाथि धनधान्यले परिपूर्ण करुणामयी दाताले लगानी गर्दैन । चतुर दाताश्रीको हिसाब सोझो छ— जहाँ लाभको गुञ्जायस छैन, त्यहाँ बित्थामा के को लगानी ? थोडै जीवनदायी जल जीवनशून्य बालुवामा छम्केर नास गर्नु छ र !
सत्ताधारी पूँपाहाहरू झीना–मसिना कुरालाई न गन्छन्, न त कुनै भाउ दिन्छन् । नाथे झिखारी, मुसहर, डोम, चमार, अमुक्त ‘मुत्त कमैया’, हलैया, बोक्सीप्रथा प्रताडित महिला, छाउपडीप्रथा पीडित नारी, खाडीबाट बाकसमा फर्किने हदअभागी, जीवनजल नपाई मर्ने तन्नम आदि इत्यादिका समस्या के हुन् ? यी सब त केवल झीना–मसिना कुरा हुन् । बिल्कुल नगण्य । यो ब्रह्माण्डको अपार विशालतासामु नाथे सामान्य जनको दैनिकीको के अर्थ ? यो अजंगको विश्वसमक्ष तिनको रोजीरोटी, तिनको दबाईमुलो, तिनका लालाबालाको कपुरी ‘क’, तिनको सुरक्षा र प्रतिष्ठा, तिनका ससाना सपना र आकांक्षाहरू— यी सब खुद्रा–मसिना कुराको के अर्थ छ ? अर्थ त बृहत्को छ । अर्थ विराटको छ । अर्थ विशालको छ । अर्थ उच्चको छ । अर्थ धुँधडाकको छ । अर्थ माथि, झन्माथि शिखरको छ । हो, अर्थ विराट रेलको छ । अर्थ विशाल पानीजहाजको छ । अर्थ बृहत् सडकको छ । अर्थ भयंकर विमानस्थलको छ । अर्थ अथाह भारबाहक वाइडबडी विमानको छ । अर्थ चामत्कारिक स्मार्ट सहरको छ । अर्थ गगनचुम्बी भ्यूटावरको छ । अर्थ जङ्गी मलको छ । अर्थ तिरिमिरी सुपरमार्केटको छ । आखिर जेमा चमकधमक छ, जेमा धुँधडाक छ, जेमा गर्जन–तर्जन छ, जेमा धाक–रबाफ छ र जेमा सहजै जगत्को दृष्टि खचिन्छि, अर्थ त केवल त्यसको न छ । बाँकी जे छ, त्यो सब केवल जीवनको नगण्य तपसिल हो । त्यो सब त फगत जीवनको नाथे पाद टिप्पणी हो । यो हो पूँपाहा कम्निस्टहरूको जीवनदृष्टि, जगत्दृष्टि र विकासदृष्टि । र, यो हो यी असाधारण प्रतिभाहरूको नयाँ युगको दिग्दर्शनकारी परिकल्पना । यो विराट र विशाल एवं उच्च र विशिष्टको अनुपम महत्ता नबुझी जो यसका विरलाकोटी स्रष्टाका कुरा काट्छन्, ती अल्पमति एवं मन्दमति कुपमण्डुपहरू हुन् । ती छन्, त्यसैले तिनलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्न पूँपाहाका बफादार अरिंगालहरू नाकानाकामा तैनाथ छन् ।
सत्ताधारी पूँपाहा कम्निस्टहरूका आफ्नै प्राथमिकताहरू छन् । नाम जस्तो छ, यिनको प्राथमिकता उस्तै छ । प्रतीकात्मक व्यवहारले तर स्पष्ट बुझिने गरी पूँपाहा भन्छ— धन, मान र चैन पहिले मलाई, त्यसपछि मेराहरूलाई । रहलपहल धन, मान र चैन अनि तँलाई, त्यसपछि तेराहरूलाई । झट्ट सुन्दा यो प्राथमिकतामा पूँपाहामा आएको ठूलो विचलन गोचर हुन्छ । पहिले, सडकमा छँदा ऊ बडो भावुक हुँदै खाने बेलामा तेरो पेट पहिले, मेरो पेट पछि भन्थ्यो । र ऊ यो पनि भन्थ्यो— मर्ने बेलामा तेरो गर्धन मुनि, मेरो गर्धन माथिे । अहिले युग नयाँ ल्यायो । र, नयाँ युगको प्रवर्तक यो पूँपाहा भन्छ— नयाँ युगमा युग सुहाउँदो प्राथमिकता त हुने नै भयो । जसले जे भनोस्, अबको प्राथमिकता यही हो— पहिले म, त्यसपछि तँ !
आफ्नो जब्बर मुठ्ठीमा सिङ्गो सत्ता छ । सत्ताको यावत् अख्तियार छ । सत्ताको सारा स्रोतसाधन छ । कानुन बनाउने साँचो डल्लै आफ्नो हातमा छ । गोली चलाउने बन्दुकमाथि आफ्नो पूरै एकाधिकार छ । तैपनि पूँपाहा कम्निस्टहरूका आफ्नै दुःख छन् । अनेकओली दारुण दुःखहरू ! पश्चात्तापको मुद्रामा पूँपाहा गम खान्छ— विगतमा आफ्नो भविष्यको किञ्चित् पर्बाह नगरी ठूल्ठूला भूल गरिएछन् । विगतमा सादा जीवन, उच्च विचारको रुमानी सूत्र खुब रटियो, खुब रटायौं । आखिरमा यही रटनाबाट लोकमानसमा आफ्नो आदर्श चिनारी बन्यो । र, यही चिनारीको पछि लागेर तन्नम दुनियाँ जगत् फेर्ने संग्राममा मर्न–मार्न तयार भयो । तर, अहिले जब सत्ता हात लाग्यो, आफ्नो यही सूत्र आफैँलाई गलापासो भयो । सामान्य न्यायका हिसाबले क्रान्तिको फल क्रान्तिका अग्रदूतहरूका लागि पनि त हनुपर्ने हो । तर, लोकमानसमा यो रटिरटाउ सूत्रले होइन भन्ने अनर्थ अर्थ सम्प्रेषण गरेको छ । त्यसैले छिसिक्क केही गर्नु हुँदैन, खायो भन्ने बात लाग्छ । नपत्याए ल सुन यो हल्लाखल्ला ः यसले हेलिकप्टर खायो ! मर्सिडिज खायो ! वाइडबडी खायो ! एनसेल खायो ! सडक खायो ! घूस खायो ! कमिसन खायो ! घरभाडा खायो ! मह खायो ! घिउ खायो ! कुराउनी खायो ! केरा खायो ! मार्सी खायो ! मानौँ क्रान्तिकारीको काम–कर्तव्य खुकुरीको धारमा खुट्टा टेकेर भोकै–नाङ्गै लड्नु र सत्ता जितेपछि भोकै–नाङ्गै भुतुभुतु मर्नु हो । हेर्नोस् त बरा पूँपाहा कम्निस्टहरूका दुःख ! जिन्दगीभरिको तृष्णाले आँत त्यसैत्यसै जलेको छ, मौकामा अलिकता भोग, सोख र मोज गरेको पनि अहारिसे लोक देखिसहँदैन । पूँपाहा कम्निस्टहरूलाई कहिलेकाहीँ त यो जनता भन्ने जिनिस गणेशमान सिंहका भेडाको विवेकहीन बगालजस्तो लाग्छ । यसमा क्रान्तिका नायकहरूप्रति एकरत्ती करुणाभाव छैन, कत्ति कृतज्ञताभाव छैन । हर्दम कसले कता के खाला भनेर चीलले चल्लालाई हेर्ने सिकारी आँखाले हेर्‍या छ–हेर्‍या छ । अनि शत्रुपक्षको हाहाको पछि लागेर हो हो भन्दै कुद्या छ ।
चिन्ताग्रस्तपूँपाहा तर्कना गर्छ— मानिस अजीवको ग्रन्थि हो । एकोहोरो, आँधो, अघोरी, हरिप र कृतघ्न । मुख छ भन्दैमा दायाँबायाँ, अघिपछि, तलमाथि केही नेहेरी, नतिजा नसोची जे पायो त्यही भन्ने । पूँपाहा यहाँनेर बडो आक्रोशित मुद्रामा मनचिन्ते कुरा खेलाउँछ— सकिन्न र मात्रै, नत्र यो झ्याउलोबाट छुट्कारा पाउन केही न केही अवश्य गरिन्थ्यो । शब्दकोश र मानवस्मृतिबाट ‘सादगी’ र ‘त्याग’ शब्दलाई सदाका लागि मेटिन्थ्यो । यत्रो जनमतको भर्‍याङ चढेर सत्ताको भतेरमा उक्लिनु, अनि अघोरी डा. गोविन्द केसीझैँ नित्य निराहार बस्नु ? आँखो छ, त्यसैले आँखाले भतेरमा बहुविध परिकारहरू देख्छ । नाक छ, त्यसैले नाकले भतेरमा मनोहारी बास्ना सुँघ्छ । जिब्रो छ, त्यसैले लालची जिब्राले घुटुक्क थुक निल्छ । उदर छ, त्यसैले चाउरिएको उदरले मीठोमसिनो अहार माग्छ । अनि ? कत्रा दुःखले भतेरमा पुगेर भोकै तड्पिइरहनु ! असम्भव । यो किमार्थ मानिदैन । जीवनका वासी परिभाषाहरू फेरिन्छ र मौकामा केही गरिन्छ । अत्ति गर्ने नाथेहरूलाई जंगी अरिंगाल सेनाले खुत्रुक्कै थला बसाइन्छ ।
सत्ताधारी पूँपाहा कम्निस्ट समृद्धिको बाटो हिँडेर दीनहीन लोकलाई सुख बाँड्दै समाजवादतर्फ पाइला चाल्न कटिबद्ध छ । कर्मले के होला त्यो भोलिले देखाउला, आज कम से कम जिब्राले यो पल प्रतिपल कटिबद्ध छ । अन्य कुराहरूझैँ समृद्धि हासिल गर्ने र वितरण गर्ने यसको काइदा पनि हुनुसम्म मौलिक छ । अर्थात् माथिमाथि समृद्धि, र माथिमाथि नै वितरण । यहाँ पनि कुराको सार आखिर उही हो— समृद्धि पहिले मलाई र मेराहरूलाई । रहरलपहल समृद्धि अनि त्यसपछि तँलाई र तेराहरूलाई । उपभोगका साधनहरू सीमित हुनु र हात थाप्ने तृषितहरू असीमित हुनुका आफ्नै दुःख छन् । निरपेक्ष समानतामा बहकिएर सीमित साधन सबैलाई बराबरी बाँड्नु भनेको ढ्याब्रे हात्तीका मुखमा कणतुल्य जिरोजस्तै हो । तर सीमित साधन माथिदेखि तल जब आलोपालो गरी बाँडिन्छ, पाउनेलाई केही पाएजस्तो हुन्छ, खानेलाई केही खाएजस्तो हुन्छ । समृद्धिको पुष्टकारीले माथि–माथिका सेवाग्राहीहरू पुष्टिँदै जाँदा तिनका देहमा मनग्ये बोसो लाग्न बेर लाग्दैन । जब त्यो बोसो पग्लिन्छ, त्यो ट्रिकल डाउन हुन थाल्छ । र, समृद्धिको तुरतुरे धारो तलका अगणित अभागीहरू, कंगालीहरू र भिखारीहरूका थाल–थालमा तप्तप् चुहुन्छ । न्याय र सुखको क्रमागत वितरणको सर्वाधिक विवेकपूर्ण विधि आखिर यही त हो । समृद्धिले जब फड्को मार्छ तब देश र जनताको अनुहार हेर्न लायकको हुन्छ । र, अब उसैगरी उच्च तहबाट त्यो हेर्ने मेसो सुरु हुन्छ । मुलुकका चमत्कारी कार्यकारीको अप्रतिम निर्वाचन क्षेत्रमा विश्वकै उच्चतम् भ्यूटावर बनेको हुनेछ । गाँठ्ठे, चानचुन पौने तीन करोड थैलोको भ्यूटावर ! देश–दुनियाँले अहोभाग्यले पाएका कार्यकारी नायक आफ्नो कार्यसिद्धिको जादुगरी कलाबाट त्यसैत्यसै मखलेल हुँदै गगनचुम्बी भ्यूटावरबाट धरातलको दृश्यावली नजर गर्नेछन् । उनी तल कतै पेटीमा मर्न लोगेको भिखारी देख्नेछन् । कतै हत्या गरिएकी किशोरीलाई न्याय माग्नेहरूको चरम् आवेगी जुलुस देख्नेछन् । र, कतै ‘दिशामुक्त क्षेत्र’ मा दिशा गर्दा रंगेहात पक्राउ परी कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीद्वारा नाङ्गै सहर घुमाइँदै गरेको चर्पीविहीन मुसहरको दर्शनीय दशा देख्नेछन् । आयो कुरा अब समस्त नरलोककै आदर्श दृष्टान्त भनिन लायककी राष्ट्रपति मयोदयाको । हंसमा देवीको अंश भएकी राष्ट्रपतिद्वारा आफ्नो दुर्लभ एवं अनमोल ज्यान आफू सुहाउँदो ३ अर्बको हेलिकप्टरमा सवार गराई बक्सनेछ । र, नवनिर्मित भ्यूटावरमाथिबाट तल धूलीकणको लोकजीवन बडो प्रसन्न मुद्रामा नजर गरिबक्सनेछ । अनि सुलसुले पत्रकार पूँपाहा कम्निस्टका उपद्रै मृदुभाषी प्रवक्तालाई सोध्नेछ—
सुयोग्य मान्यवर ! त्यो उचाइबाट निचाइमा नजर गर्दा हाम्रा यी उच्च मानवद्वयका दिव्य दृष्टिमा झल्किने धरतीको विशिष्ट दृश्यबारे केही अनुमान गर्न सकिएला कि ? पुक्खली पूँपाहा प्रवक्ताका वाचाल जिब्राका टुप्पामा उत्तर हाजिर हुनेछ । मिठ्याउँदै उसले भन्नेछ— हे पत्रकार, सकिन्छ । सुन ! त्यो दृश्यमा निश्चय नै विविधता झल्किनेछ । त्यहाँ समृद्ध र सुखी मानव पनि गोचर हुनेछ । त्यहाँ कंगाली र दुःखी भिखारी पनि गोचर हुनेछ । पछि–पछिसम्म समृद्धिमय सत्कर्म गर्दै समाजवादतिर गइरहन गरिब, तन्नम र भिखारीको बीउ त जोगिनैपर्छ । यो पूँपाहा कम्निस्टको विकाससम्बन्धी दर्शनको अमूल्य सार हो ।
यहाँनेर जडी कुरो अर्को एउटा पनि छ । यथार्थवादी पूँपाहा प्रवक्ताले जिज्ञासु पत्रकारका कानमा खुसुक्क भन्नेछ— त्यो क्या त्यो छ नि त्यो केजाति राष्ट्रवाद ? अँ, औधी गुनिलो र सदा लाभदायक हाम्रो मधुमय त्यो राष्ट्रवाद ! भोगिजान्ने भाग्यमानीलाई थाहा छ पत्रकार, त्यो राष्ट्रवादको ध्वजा नित्य सम्मोहक छ । त्यसले लोकलाई मुग्ध तुल्याउने लोकप्रियता हठात् आर्जन गरिदिन्छ । तसर्थ राष्ट्रवाद जीवन्त रहन देशमा अलिकता दरिद्रता, अलिकता याचकपन, अलिकता पराश्रय र अलिकता आत्महीनता बाँकी रहनु अनिवार्य छ । यो कुरा अफ द रेकर्ड रहोस् पत्रकार, यो बाँकी नरहे सत्तारोहण गर्ने जादुगरी सोपान हामीले कुन जुक्तिले हात पार्नु ? तसर्थ हामी भन्छौँ— खटाइ–खटाइ समृद्धि, किस्ता–किस्ता गरी समृद्धि, शनैःशनैः समृद्धि । र, सोची–विचारी समाजवादतिर, पाइला–पाइला गरी समाजवादतिर, शनैःशनैः समाजवादतिर । यो हो पूँपाहा कम्निस्टको गति र प्रगति एवं समृद्धि र सुखको मौलिक सूत्र ।
जगत् नित्य गतिमान् छ । समाजवादमुखी समृद्धितर्फको पूँपाहा अभियान चल्दो छ । बिना हुटहुटी, बिना हतार, चिप्ले कीराको गतिमा सुस्तसुस्त । सत्य हो, समृद्धिको सुन्दर पथ निष्कण्टक छैन । नवीन राजनीतिक स्रष्टाहरूद्वारा सिर्जित यो सुन्दर पथमा कुरूप अवरोधहरू पैदा गर्ने तत्त्वहरू बहुल छन् । लेखक र कवि, गायक र कलाकार, चिन्तक र प्राज्ञ, पत्रकार र अनुसन्धाता, टिप्पणीकार र विश्लेषक, एनजीओ र आईएनजीओ, आदि र इत्यादि । सकल अविवेकी, अराजक, अघोरी, अटेरी र अमनचैन एवं प्रगति विरोधी तत्त्वहरू । जब यी नौरंगी अनिष्टकारी तत्त्वहरू स्वतन्त्रताको घण्ट बजाउँदै दुःख दिन्छन्, पूँपाहा कम्निस्टका शिखर पुरुषहरूलाई चल्नुविधि झोँक चल्छ । टुप्पीबाट झोँकको धूवाँ छुटेको बेचैन क्षणमा यिनको अतिशय क्रुद्ध चित्त सान्त्वनाकारी सहारा खोज्छ । र, पूँपाहा महलका शीर्ष पुरुषहरूलाई झ्याट्ट उत्तर कोरियाको याद आउँछ । अहा ! क्या छ उत्तर कोरिया ! क्या कानुन र व्यवस्था छ ! क्या अनुशासन र मर्यादा छ ! एक जना महान् नेता कमरेड किम जोङ इल बोल्छन्, सिङ्गो देश शिर निहुराएर चुपचाप सुन्छ । कमरेड किम ‘उठ्’ भन्छन्, सिङ्गो देश जुरुक्क उठ्छ । कमरेड किम ‘बस’् भन्छन्, सिङ्गो देश थ्याच्च बस्छ । बुद्धिजीवी हुँ भन्ने जीवात्ले यहाँजस्तो बकबक गरे थलैमा त्यसको जिब्रो थुतिन्छ । उता नित्य काम हुन्छ, यता नित्य बककास चल्छ । कमरेड किम जोङ इलको छत्रछायामा उता अनुपम राष्ट्रिय एकता छ । पठित पागलहरूको ताण्डव व्याप्त भएको यता हाम्रोमा भयंकर राष्ट्रिय विभाजन छ । यहाँनेर पूँपाहा कम्निस्टहरूलाई ईर्ष्या लाग्छ— त्यस्तो अनुशासन र मर्यादा भए पो विकासले गति लिन्छ, समृद्धिले फड्को मार्छ, सुखको मूल फुट्छ र समाजवादको दैलो उघ्रिन्छ । पूँपाहा महलका हर्ताकर्ताहरू अथक पिराहा पठितहरूसँग मुर्मुरिँदै दृढ संकल्प गर्छन्— हेर्दै जाऔँ न । हामी पनि चतुर्‍याइँसाथ व्यूह रचना गर्दै, घरी शत्रुपक्षहरूका आँखा छलेर र घरी निजरुलाई दमन गरेर शनैःशनैः जादुगरी, चमत्कारी, सम्मोहक, देदीप्यमान र निष्कण्टककिम जोङ इल पथतिर...।